>နိစ္စဒူဝအပိုင်းအစအချို့ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: တက်ခ်ပိုစ် — 8 Comments	September 8, 2009
စာမရေးဖြစ်တာ ကြာသွားလို့ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးမေးသွားကြတဲ့ ဘလောခ်ရောင်းရင်းပေါင်းအသင်းများကို တောင်းပန်သမှု ဂါရဝပြုလိုက်ရပါတယ်။ စာရေးချင်စိတ်လေးကရှိပါတယ်။ဘလောခ့်ပေါ် ခြေဦးမလှည့်နိုင်လောက်အောင်ကို အလုပ်တွေပိပြားနေလိုပါ။အခုလဲ မနှင်းက စာရေးငပျင်းအကျွန်တော့်ကို ငယ်ရွယ်စဉ်က ကျောင်းက ဆရာမက အိမ်စာပေးသလို အိမ်တိုင်ရာရောက်လာရောက် အိမ်စာတွေပေးသွားတဲ့အတွက် လာမည့်အရေးပြေးတွေ့ဆိုသလိုပါပဲ ကြံရည်ညစ်သလို ဖြစ်ညစ်ပြီး ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။နဂိုထဲက ကျွန်တော်စာတွေကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ဘလောခ်ရောင်ရင်းပေါင်းအသင်းတွေအပေါ် လာရောက်လည်ပတ်သွားရင်းနဲ့မှ ကျွန်တော်ရဲ့ စာပေပြခန်းလေးထဲမှ အကုန်မဟုတ်ရင်တောင်မှ တစ်ခုခုဆီလောက် အကျိုးရရသွားကြတယ် ဆိုရင်ကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတာအမှန်ပါ။စာသိပ်မရေးဖြစ်ချိန်မှာ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမောင်နှမ ညီအကိုတွေကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးပါ။ တတ်နိုင်သလောက်လဲ ကြိုးစားရေးသားပါဦးမယ်။ အားပေးကြပါဦး။ ကူညီဖတ်ပေးကြပါဦး။ ဝေဖန်အကြံဥာဏ်လေးများးလဲ ပေးကြပါဦး။ ကော်မန်လေးတွေရရင်ကို ဘာနဲမှ နှိုင်းမရတဲ့ အားဆေးကောင်းတခွက် ဘလောခ်မော်ကွန်းလေးတွေပါပဲ။
အဲဒီသီအိုရီလေးပေါ်မှာပဲ အနဲနဲ့အများ ဖြေရှင်းနေထိုင်သွားကြရတယ်။ တနေပြီးတနေ့ ဟော…..မနက်ရောက်လာပြန်ပြီ၊ နိစ္စဒူဝအလုပ်တွေ သိမ်းကြုံးလုပ်ကိုင်ရင်း ဟော…..မိုးချုပ်သွားပြန်ပြီ။
သြော်…………တခါတလေကြတော့လဲ အချိန်တွေရယ်…….. ကုန်လွယ်လိုက်တာ….. နဲတောင်နဲများနေသလားလိုထင်မိတယ်။
တခါတလေများကြပြန်တော့ အချိန်တွေက မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်သလိုပဲ နှေးနေတယ်လိုပင်ထင်ရမိသည်။လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်သလိုထင်ပါ့။ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊သာယာမှုတွေအနားမှာ ရောက်ရှိနေချိန်ဆို လူသားသဘာဝအတိုင်း ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကို အချိန်တိုတိုအတွင်း လက်လွှတ်လိုက်ရမှာကို စိုးရွှံလိုနေမိပြန်တယ်။
တခဏတာလေး သာယာပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ရာသက်ပန် လိုလားပိုင်ဆိုင်မှု အတ္တလေးနဲ့ ဖြားယောင်းနေမိတယ်။ တဒင်္ဂ အခိုက်အတန်းကလေးအတွင်းမှာပဲ သင်္ခါရဆိုတာကြီးကို လစ်လျုရှုပြီး မှော်ဆန်ဆန်သွေးဆောင်မှုတွေ ပေါ်မှာပဲ မူးယစ်မျောပါနေမိတော့တယ်။
ဟော….ဒုက္ခတွေ၊ ပြသာနာတွေ လာပြီဆိုရင်တော့ လူသားဆန်ဆန် အော်ဂလီဆန်စွာနဲ့ ငြင်းပယ်လိုတာပဲ။
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကြာရှည်ခိုအောင်းပြီး ဒုက္ခဘေးဆိုးကြီးမှ ကင်းစင်လွှတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ Share this:FacebookPrintEmailLike this:Like Loading...
8 Comments: မိုးစက်အိမ်
September 8, 2009 at 11:35 am	>မှန်ပအကိုရေ နိစ္စဒူဝ မှာ ကောင်းတာသာ မလာရင်ရှိရင်ရှိမယ် ကံများမကောင်းတဲ. နေ.တော. အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀င်တော.တာဘဲဗျာ … နိစ္စဒူဝတိုင်းအေးချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ….
September 8, 2009 at 3:05 pm	>ကံများမကောင်းရင် ရေသောက်တာတောင် နင်တယ်တဲ့ အကိုရေ နိစ္စဓူဝ ကြုံနေရသမျှကတော့ သုခက နည်းပီး ဒုက္ခများပေမဲ့လဲ လူ့အဖြစ်က ဓားသွားပေါ်က ပျားရည်စက်လေးတွေကို အရသာခံရသလိုပါပဲသူ့နည်းသူ့ဟန်တော့ ပျော်သလိုနေရတာပဲ😦
September 8, 2009 at 4:15 pm	>မင်္ဂလာပါ။ လာလည်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ အတွေးစာတွေ ကို တွေ့ရတယ်။ ဒီအချိန်တရား အလုပ်လုပ်ရင်တော့ တရားရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ။
September 8, 2009 at 8:44 pm	>ကိုချမ်းရေနိစ္စဓူဝလေးကို ရေးပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်…ကံမကောင်းခြင်း ဒုက္ခတွေကတော့ အဖော်နဲ့ အပေါင်းနဲ့ပဲလာကြစမြဲလေ….ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်လေးတွေလဲ ရှိတတ်ပါသေးတယ် အကိုရေ..ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာ နိစ္စဓူဝလေးတွေ ကြုံပါစေနော်…နှင်း
September 9, 2009 at 4:56 pm	>ဟုတ်တယ်နော်..နေ့တဒူဝ..အမျိုးမျိုးကိုစုံနေတာပဲ
September 10, 2009 at 5:28 am	>၀ိုင်းလည်း နိစ္စဓူဝ ရုံးကိုပြေးနေရတာပဲလေ ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှာပဲနေရတာကိုး…..တခါတလေ ငြီးငွေ့မိတယ် ကိုချမ်းရေ..နိစ္စဓူဝ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်
September 12, 2009 at 4:25 pm	>နိစ္စဒူဝမှာကျင်လည်ရင်းပျော်လိုက်၊စိတ်ညစ်လိုက်၊ကြည်နူးလိုက်၊၀မ်းနည်းလိုက်နဲ့အချိန်တော်တော်များများကျွန်မတို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပြီနော်။ဆက်ပြီးလည်းဒုက္ခသုခအကောင်းအဆိုးတွေရင်ဆိုင်ကြရအုံးမှာ။ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေကိုချမ်းရေ..
September 29, 2009 at 7:13 pm	>မှန်တယ် ဘကြီးရေ…ပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်တဲ့ နိစ္စဒူဝလေးဖြစ်ပါစေ။
« >Stand By Me
>Nine In The Nine »